ikhaya » Okufumaneka » Ukugcinwa okuManyeneyo kulula ukusetyenziswa kweeV18 ezinamandla ene-VN 360 °
Ukugcinwa okuManyeneyo kulula ukusetyenziswa kweeV18 ezinamandla ene-VN 360 °
Ukuhanjiswa kwe2017 BroadcastAsia
NguTom McDonald, ukuThengiswa koBuchule I-Quantum
Inyaniso eyiyo (VR) Ividiyo ye-360 ° idala ifilimu entsha, amavavethi kunye namabala okudlala okuvumela abaphulaphuli ukuba balawule apho kugxininiswe ingqalelo yabo. Oku kukutshintsho oluphawulekayo kumava ababukeli abavalayo ukususela ekufikeni kwefilimu.
Ukutshintsha iparadigm eneminyaka eyi-100 ayikho imingeni yobuchwepheshe. Ukuphendula i-call yokuqala yayiyimiphumo ebonwayo
(VFX) artists. Ngesakhono esomeleleyo esakhelwe ukuhlanganiswa, ukuqonda kwe-2D kunye ne-3D indawo, kunye ne-flare ye-artificial, abaculi be-VFX babokuqala ukujongana ne-VR post-production. Imingeni yokubetheka kwekhamera, ukutshatyalaliswa kwe-rig kunye nokuphathwa kwe-panoramic image kufuna ezininzi izakhono ezifanayo.
Ngenxa yokuba i-VR 360 ° isisiseko esitsha, uhlahlo lwabiwo-mali luvame ukulinganiselwa. Iimvumi zeVFX zihlala zibizwa ukuba zidale iziboniso eziphosakeleyo ukuze zizalisekile. Abaculi abanezakhono banokudala i-cowboys ye-20 kwindawo apho uhlahlo lwabiwo-mali lunokuxhasa kuphela ezintathu. Ukholo lwangasemva lwangasemva kolwandle lunokungeniswa kwimeko yebhodi lokuthunyelwa ngaphandle kokufuna ukulahla kwamanzi.
Ukujongana neemfuno ze-VFX kunye neVR 360 ° Ividiyo
Ukwenza imifanekiso ejikeleze abaphulaphuli, imifanekiso evela kwiinkhamera ezininzi kufuneka iqinisekiswe kunye nomfanekiso omkhulu wepanoramic - elilinganayo ne-6K okanye i-8K umfanekiso wesisombululo. Umxholo ojolise ekuboniseni ukuphakama kweentloko eziphezulu kunye ne-3D stereoscopic, izigqibo ezigqityiweyo zingaba phezulu. Umngeni awukho nje ukugcina ukutya okukhawulezileyo ukuxhasa ezo mifanekiso ezinkulu, kodwa kwakhona ekuhlangabezaneni neemfuno zokugcina ukulungiswa kunye nokubala imibala ye-VR 360 °, ehlala ihluke kwiimfuno ze-VFX kunye nefowuni.
Ukuhlela kunye nokubamba kufuna iimitha zokugcina ezinikezela ukukhawuleza ukudlala ngokulandelelana kwamafayili adiweyo kwi disk. Iimpawu ezibonakalayo kunye nezoboniso zingadinga zombini ulandelelwano kwaye Ukusebenza okungahleliwe.
Izixhobo zendawo yokugcina iziteshi ze-Fiber (SANs) ziyakuthandwa ngokudlala ngokulandelelanayo kwamafayile amakhulu kunye neefayile kuba ii-SAN zihambisa ukuqinisekiswa, ububanzi obuqinisekisiwe kumsebenzi ngamnye ohlangeneyo. Umsebenzi wefayile, iifayili ifundwa kwaye ibhala ibincinci, kodwa ivela ngokungahleliwe, kwaye isuka kwinani elikhulu lee-workstations. Ukugcinwa kokungalindelekanga kuninzi kuqoqosho kusetyenziswa inkqubo yokugcina intanethi egcinwe kwi-IP (NAS). "Inzame engcono" yendalo yeprotocols IP idibanisa kakuhle kunye nohlobo oluthile lwe-animation, elingafuneki ukudlala ngokulandelelana kweefayile ezinkulu.
Ngokwenza, nangona kunjalo, ukugcina iinkqubo ezimbini zokugcina ezihlukeneyo kunokubiza kwaye zikhokelela ekuphindaphindiweyo kweefayile ezinkulu. Kungenxa yoko ezinye izithuba zokuthutha ziphendukele kwisitoreji esinobunye, ukuhlanganiswa kwe-SAN ne-NAS. Ngokuxhasa uxhulumaniso lwe-IP kunye neFiber kwi-infrastructure yolondolozo efanayo okwabelwana ngayo, le ndlela ivumela izithuba zithuba ukuba ziphephe ukudluliselwa kwexesha elixhomekeke kwinethiwekhi phakathi kweesiteji phakathi kwamanqanaba okuhamba komsebenzi. Zombili zinciphisa ixesha kwaye zinika abaculi ithuba elingakumbi lokudala.
Ukusebenza okungahleliwe okufunekayo kumsebenzi wezithombe ezinokwenziwa kwemifanekiso kunokuphuculwa ngakumbi ngabaqhubi bemimoya eqinile (ii-SSDs), ezisebenzisa imemori yefowuni esikhundleni sokutshintsha i disk. Ukupheliswa kwexesha elifunekayo ukuba iinqununu zokuqhuba iifayile zifumane iifayile zithetha ukuba ii-SSD ziyakwazi ukuhambisa apha kwi-10 ukuya kwii-100 ngokuphindaphindiweyo ukusebenza kunokuba i-hard disk drive (HDDs).
Zonke iifrashi ezikhanyayo zinikeza umsebenzi oyingqayizivele, kodwa zinokubiza. Inketho eyongezelelekileyo yindlela edibeneyo ye-hybrid: inhlanganisela yama-SSD nee-HDD. Ubulumko kulawulo lwabadlali lubeka iliso kwiifayile ezisetyenziswe ngokulula kwaye zigcinwe kwisahlulo sokugcina esicatshulwayo. Ukuba iifayile azilisebenzisi ngexesha elithile, zichithwe kwii-HDD ezingakumbi kwi-array.
Ukuqulunqa iSahlulo soHlelo
Ukusebenza kakuhle kwendawo yokugcina isingqinisiso kungakhuthaza kakhulu kwisithuba se-VR 360 °. Abaculi bayonwabile kwaye bavelisa ngakumbi kuba isofthiwe yokudala isabela ngokukhawuleza. Bangakwazi ukwenza umxholo wokubandakanya ngexesha kunye nohlahlo lwabiwo-mali. Izixhobo ezisebenzisekayo ngale ndlela yokudala zingaqala ngokucwangcisa okuncinci ukugcina kunye nokunyusa ukusebenza kunye nomthamo njengoko kuyimfuneko. Ngenxa yesisombululo esinokuguquguquka, esinamandla sokwenza izinto, iinkampani zokuvelisa umxholo zingakwazi ukuzalisa amaphupha abo ababukeli bezilwanyana ezingabonakaliyo namhlanje kwaye zilungele ubuchwepheshe obuzayo obuza kubakhokelela nakwixesha elizayo.
ITeknoloji yeTV ndiphila	2017-05-21
Previous: Ukukhanyisa iMic Guff idibanisa ukuKhula kunye neMingeni yeNtsebenzo kunye neeNkqubo eziPhambili
next: Umlingene wobunjineli
Hey Buddy !, Ndifumene le ngcaciso kuwe: "Ukugcinwa Okubumbeneyo Kunciphisa Ukusetyenziswa Kwezandla Zamaqhosha E-VR 360 ° zeVideo". Nantsi ikhonkco lewebhu: http://www.broadcastbeat.com/unified-storage-simplifies-use-fower-vr-360-video-storytelling-tools/. Enkosi.